Isgoysyada jidgooyooyinka sharci darrada ah ee Bridge iyo Jidku waxay yimaadaan sharciyo u degsan heerka ciqaabta | RayHaber | raillynews
HometareenkaJaangooyooyinka sharci-darrada ah iyo gawaarida sharci-darrada ah
27 / 01 / 2015 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Gaadiidka iyo jidadka gawaarida sharci-darrada ah ee socdaalka ayaa imaanaya: 100 waxaa ku jira kumanaan baabuur iyo milkiilayaasha gaadiidka leh buundada xun iyo dariiqyada sharci-darrada ah ee waddooyinka sharci-darrada ah.
Haber7 ayaa kor u kacay iyo tobanaan kun oo mulkiilayaasha baabuurta ah ayaa ka cabanaya, boggeyga ayaa sidoo kale loo dhiibay ganaaxa. Iyada oo shaqada diyaarisay, weedha 'fogaanta ugu furan' ayaa loo bedeli doonaa masaafad galalka soo-saarka, iyo 7 ayaa la kordhin doonaa maalinta 15.
Kumanaan ka mid ah milkiilayaasha baabuurta ee aan haysanin kaararka wadada iyo fareebka ama miisaankoodu aanu ku filneyn ama khasaare soo gaadhay waxa ay ku arkeen bayaannada ay ka heleen Agaasinka Guud ee Wadooyinka ama weydiimaha laga sameeyo internetka.
100 MARKALE XADGUDUBA WAQTIGA KA DHACAY!
Sababtoo ah darawal badan oo baabuur wata ka dib markii ay ku habboonayd kala-guurka, waxay u maleynayeen in mushaarka la ganaaxi doono xaddiga saacadaha 10. Laakiin ma aysan dhicin. Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, heerka ganaaxa ee baasaska sharcidarrada ah waxaa lagu go'aamiyey masaafada ugu fog. Xaaladdan, tirada mulkiilayaasha maskaxda ku haysa tirada 80 ayaa kor u kacay wax ka badan hal mar.
Si aad u badan sidaa darteed milkiilayaasha baabuurta qaarkood oo ka faaiidaysta ganacsiga kala-guurka sharci-darrada ah, xitaa in ka badan £ 1,000 deynta 100 ayaa laga saaray. Waxaa la ogaaday in milkiilayaasha baabuur badan oo go'aansaday in ay go'aansadaan waxa la samaynayo wajiga badan ee keentay in ay iibiyaan gaariga si ay u bixiyaan ganaaxa.
Xildhibaannada Xisbiga AK-ta ayaa u dhaqmey horumarinta iyo cabashooyin badan.
Qorshaha sharciga ee loo gudbiyay Baarlamaanka, ayaa la codsaday in la soo afjaro cabashadda khidmadaha iyo fiilooyinka biriijka. Marka la eego soo jeedinta, weedha "esine" illaa fogaanta ugu dheer ee waddadaas ee ku taala sharciyada Agaasinka Guud ee Waddooyinka Wadooyinka waa la weydiiyay in lagu bedelo fogaanta fogaanta in uu galo oo baxo adoon bixin kharashka ".
7 MAGAALADA MAGAALADA 15 LAGA BILAABO
Mar labaad baaxadda qorshaha isku midka ah, 7 marxalad maalmeedku kuma filnayn nidaamka aruurinta lacagta la isku daro ee la xidhiidha ciqaabta lagu soo rogay lana weydiistey in ay kordhiso waqtigaan maalinta 15. Sidaa daraadeed, milkiilayaasha baabuurta la joojiyey ayaa la siin doonaa fursad ay ku bixiyaan ganaaxyadooda mudo dheer iyadoon ogeysiin.
Dhinaca kale, dalabkii lagu sameeyey qaabka dhismaha-Hawlgallada-Dhaqaalaha ee jidadka wadooyinka waaweyn ayaa sidoo kale lagu sheegay. Qaab dhismeedka Dhismaha-Hawl-Dhexdhexaadinta ee dariiqyada waawayn ee isticmaalka ayaa ka sarreeya jidadka waawayn ee la isticmaalo, waxaa lagu tilmaamay in qaddar aad u sarreeya ee farsamadu ay keeni doonaan dhibaatooyin dheeraad ah.
BAABUURTA LAGU QAADINAYO DAWLADDA DEMBIYADA
Baaxadda baaritaanka, shuruucda ayaa sidoo kale la siiyaa baabuurta leh taarikho shisheeye oo soo galaya oo ka baxsanaya lacag la'aan wadooyinka iyo buundooyinka. Iyadoo aan loo eegin haddii darawalku yahay muwaadin Turkish ah, ganaaxyada baasaska bilaashka ah ee baabuurta tiknoolajiyada shisheeye waxaa loogu talagalay in lagu soo uruuriyo iyada oo la ogeysiinayo darawalka irridaha laga soo galo ee goobaha ganacsiga. Saxanka shisheeye looma oggolaan doono inuu ka baxo dalka ka hor inta aan la qaadin.
La soo rogay qiimaha SCT ee baabuurta
TÜSODER waxay qaadataa wadada iyo jidka tareenka gaabinta xukunka
waddada weyn ee laga soo galo